एन्ड्रोइड | मा Spotif मा 10 सर्वश्रेष्ठ विकल्पहरू Androidsis
शीर्ष १० विकल्पहरू एन्ड्रोइडमा स्पोटिफाई गर्न
Spotify वर्षौं को लागी एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण स्ट्रीमिंग सेवाहरु को एक हो र नि: शुल्क वा भुक्तानको फाइदा लिन विभिन्न योजना प्रस्ताव गर्दछ। पहिले नै पार गरिसक्यो million 350 करोड प्रयोगकर्ताहरूको अवरोध मासिक, तर सबैभन्दा ठूलो क्याटलगहरू उपलब्ध भएको भएर विश्वव्यापी रूपमा बढ्न जारी राख्न चाहन्छ।
यो सेवा केवल एक मात्र उपलब्ध छैन, विशेष गरी यदि तपाईं बिभिन्न शीर्षकहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र जो प्लेटफर्म मार्फत संगीतमा जान चाहन्छन्। Spotify को लागी १० उत्तम विकल्पहरु भेट्नुहोस्, ती सबै एन्ड्रोइड प्रणालीमा उपलब्ध छन् र धेरै केसहरूमा अघिल्लो दर्ताको साथ।
प्रस्ताव: तपाईं अमेजन संगीत असीमित को निःशुल्क प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यस लिङ्कबाट।
3 अमेजन संगीत
7 YouTube संगीत
8 एप्पल संगीत
9 शार्क - संगीत
Spotify सँगसँगै, यो सेवाहरू मध्ये एक हो जुन ठूलो संख्यामा अडियोहरू उपलब्ध छन्। साउन्डक्लाउडमा २०० मिलियन भन्दा बढी अडियोहरू छन्, जसमा म्यूजिकल अडियोहरू र पोडकास्टहरू छन्, भर्खरको होस्टियनहरू र रेडियो कार्यक्रमहरू द्वारा प्रायोजित जुनसुकै ठाउँबाट पनि धेरै स्पेनियाहरू।
प्लेटफर्ममा धेरै प्रख्यात कलाकारहरू छन्, तर ती पनि जुन तपाईले अन्यमा पाउन सक्नुहुन्न, प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि प्रकारको अडियो सुन्न सक्षम हुने विकल्प दिँदै। धेरै कलाकारहरु प्राय: आफ्नो सामग्री साझा गर्छन्, चाहे गीतहरू, ध्वनि निर्माण, अन्य कार्यहरू बीच।
साउन्डक्लाउडसँग नि: शुल्क संस्करण छयद्यपि यसले दुई थप सदस्यताहरू पनि थप गर्दछ जस्तै such.5,99eयुरोका लागि साउन्डक्लाउड गो र साउन्डक्लाउड गो + 9,99 युरो प्रति महिना। तपाईं दुबै दायित्व बिना दुबै कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्लस सदस्यताका लागि पहिलो र एक महिनाको लागि days दिनको साथ, दुबै सामग्री साझा गर्नुहोस्, तर अन्तिममा सीमाको बिना सेवाको सबै सामग्रीहरू पहुँच गर्दछ।
साउन्डक्लाउड - संगीत, प्लेलिस्टहरू र पोडकास्टहरू
यो एक अनुप्रयोग हो जुन सबैको सब भन्दा ठूलो डाटाबेसको साथ करीव million० करोड गीतहरू छन् जुन क्षणमा तपाईले खोजिरहनु भएको छ मा उपलब्ध छ। अफलाईन प्लेब्याक, असीमित स्किपहरू र अन्य थप विकल्पहरू थप्नुहोस् यदि तपाईं सागर भुक्तान विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग एक-महिना परीक्षण संस्करण भए पनि।
टाइडलको पछाडि व्यक्तिहरू संगीत सामग्रीका सिर्जनाकर्ता हुन्, यसैले उनीहरूले स्पोटिफाइको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये धेरैलाई नै प्याम्पर्ड गरेका छन, हुनसक्छ यो त्यस्तो हो जुन यसको नामको कारणले सबैभन्दा कम आवाज लाग्दछ। ध्वनि गुण उत्कृष्ट छ, किनकि अडियोहरू प्लेटफर्म दायरामा अपलोड १ 192 २ देखि 320२० केबीपीएस सम्म।
टाइडलसँग २ 250.000,००० भन्दा बढी उच्च गुणवत्ता भिडियोहरू छन् पुनरुत्पादित गर्न, सेवामा लोक कथा, हिप हप र अन्य विधाहरूको श्रव्य संख्याको एक ठूलो संख्या राख्नुको अतिरिक्त। प्रीमियम संस्करणको मासिक 9,99 .19,99eयुरो छ, जबकि हाई-फाई संस्करणको प्रति महिना १।। Eeयुरो हुन्छ।
TIDAL - संगीत स्ट्रिमि।
सेवामा कुनै पनि प्रकारको सामग्री पुन: उत्पादन गर्न प्लेटफर्मको साथ अमेजनले २०० 2007 मा अडियो स्ट्रिमि ofको विश्वमा प्रवेश गर्यो। अधिक डाउनलोड र सदस्यताहरूको साथ अमेजन संगीत लामो समयदेखि एक अनुप्रयोगहरू मध्ये एक भएको छ होस्ट गरिएको सामग्रीमा धन्यवाद, थप गरिएको छ जुन नयाँ भन्दा थप।
संगीत डाटाबेस २ लाख भन्दा बढी छ, यो स्पोटिफाइ (million करोड than० लाख भन्दा बढी गीतहरू) को रूपमा पूर्ण हुन चाहान्छ भने अरूलाई उफ्रिनु पर्छ। यदि तपाईं धेरै विस्तृत विकल्प चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले Amazon० लाख ट्र्याकहरूको साथ अमेजन संगीत अनलिमिटेड प्राप्त गर्नुपर्नेछ र content .70eयुरोका लागि विशेष सामग्रीमा पहुँच।
अमेजन संगीत सेवा Spotify को लागी एक उत्तम विकल्प हो जब सम्म तपाईं असीमित पाउनुहुनेछ, भुक्तान हरियो अनुप्रयोगको मासिक प्रीमियमसँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाइँसँग हालै नि: शुल्क महिना छ यदि तपाइँ अमेजन प्राइम प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न भने, यदि तपाइँ अन्तमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँले चार महिना पाउन सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय स्ट्रिमि services सेवाहरू मध्ये एक पाण्डोरा हो, स्पोटिफाइसँग मिल्दोजुल्दो र उत्तम यदि तपाईं उत्तम ज्ञात कलाकारहरूको संगीत खोज्न चाहनुहुन्छ भने। पाण्डोराले नयाँ कलाकारहरूलाई समयको साथ समावेश गर्दै आएको छ, यति धेरै कि योसँग यसको एक महत्त्वपूर्ण आधार छ जुनसँग यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछ।
पाण्डोराले कलाकार र विषयवस्तुहरू, प्लेटफर्मबाट प्लेब्याक, हामीले चाहेको ट्र्याक पज गर्न र हामीलाई यो मनपर्दैन भने यसलाई हटाएर गीतहरू खोजी गर्न अनुमति दिन्छ। आवाज आदेशहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाईं अधिक चाँडो खोजी गर्न चाहानुहुन्छ भनेसबै अन-स्क्रिन किबोर्डको प्रयोग बिना नै।
सदस्यता सेवाहरू विविध छन्, यी सबै एक प्लेटफर्मको कार्यहरू विस्तार गर्दछ जुन उपलब्ध योजनाहरूको लागि धन्यबाद हो। पाण्डोरा प्लस सेवाको मूल्य 4,99..9,99eयुरो छ, प्रीमियम XNUMX. .XNUMX। युरोमा जान्छ, परिवार र विद्यार्थीहरूका लागि अन्य योजनाहरू बाहेक।
पाण्डोरा - स्ट्रिमिंग संगीत, रेडियो र पोडकास्टहरू
यदि तपाईं स्पोटिफाइको लागि निःशुल्क विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो निस्सन्देह एक उत्तम स्ट्रीमि services सेवाहरू मध्ये एक हो। यससँग लाखौं गीतहरू छन्, असीमित पहुँच छ र सबै भन्दा राम्रो चीज भनेको प्रत्येक फाइलहरू अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, जबसम्म तपाईंसँग ती उपकरणहरूमा एप्लिकेसन हुन्छ।
इन्टरफेस सरल छ, आधारभूत विकल्पहरूको साथ जब यो अडियो बजाउन आउँदछ, कि त्यो सुनुवाईको लागि यो क्षणमा वा एक निजीकृत प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न। अनुप्रयोगले एक विज्ञापन जोड्दछ, राम्रोसँग प्राप्त भएको छ ताकि यो एक नि: शुल्क मञ्च हो र बिना महिन महिना भुक्तानी।
अनुप्रयोगको केहि कमजोरीहरू मध्ये एक जुन गीतहरू सुन्नुहोस् तपाईंसँग इन्टरनेट जडान हुनै पर्छ, अर्को सम्भावना पहिले यो डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। सोंगफ्लिपसँग धेरै सांगीतिक विधाहरू छन्, जसले संगीत सुन्ने बित्तिकै प्रयोगकर्तालाई सम्भावितताको विस्तृत श्रृंखला दिन्छ।
यो स्पोटिफाईमा उत्तम विकल्प हो, किनकि डिजरले लाखौं गीतहरू एकीकृत गर्दछ एक पटक तपाईं संगीत स्ट्रिमिंग सेवा प्रविष्ट गर्नुभयो पहुँच योग्य। विज्ञापन संग नि: शुल्क योजना एक लामो समय को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यद्यपि विकल्पहरु मध्ये एक मासिक भुक्तानी संग यसलाई हटाउन को लागी हो।
डीजर एक गीत पहिचानकर्तामा आधारित छ, ध्वनि क्याप्चर गर्न र यसलाई डाटाबेसमा खोजी गर्न सक्षम हुन, जुन धेरै विस्तृत छ। एप्लिकेसनको आधार करिब 56 XNUMX मिलियन ट्र्याकहरू छन्, तिनीहरू सबै सुन्न योग्य छन्, सामान्य योजनामा ​​लगभग 9,99 .XNUMXeको लागि एक प्रीमियम खाता प्राप्त गर्न।
डीजर सेवा वेब प्लेटफर्मबाट चल्छ, एन्ड्रोइड र आईओएसमा अनुप्रयोगहरूको माध्यमबाट जाँदै, तीन सम्भाव्यताहरू पहुँच गर्दै, जुन नि: शुल्क खाता हो, सामान्य योजनाको लागि 9,99. .14,99eयुरो र परिवार योजनाको लागि १ XNUMX युरो, जुन घरका प्रत्येक व्यक्तिको लागि एक छ वटा खाता हो।
डीजर - संगीत, प्लेलिस्टहरू, र पोडकास्टहरू
विकासकर्ता: डीजर संगीत
भिडियो विशालले अडियो स्ट्रीमि service सेवा सुरू गर्‍यो संगीत सुन्न र कुनै श doubt्का बिना Spotify को लागी एक उत्तम विकल्प को एक हुन चट्टानहरु को रूपमा। यो million० मिलियन ट्र्याक भन्दा बढी छ, ती सबै पहुँच योग्य जब तपाईं चाहनुहुन्छ, अनुकूलन प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुको साथै।
थप रूपमा, खातासँग तपाईंसँग संगीत भिडियोहरूमा पहुँच हुनेछ, फोनहरू, कम्प्युटरहरू र ट्याब्लेटहरू सहित, कुनै पनि प्रकारको उपकरणको लागि आदर्श। यूट्यूब संगीत आफ्नो काम पोष्ट गर्न चाहनेहरु लाई अलग बनाउनको लागि सिर्जना गरिएको हो म्यूजिकलहरू, तपाईंलाई पाईको एक टुक्रा दिन्छ।
प्रीमियम सेवा फरक हुन्छ, यी सबै यदि तपाईं सामान्य योजना चाहानुहुन्छ जुन month month9,99 per प्रति महिना हो, विद्यार्थी योजना तल 5,99..11,99। युरोमा जान्छ र परिवार योजना ११.XNUMX युरोसम्म five खाताहरू सम्म। YouTube संगीत धेरै लाखौं अतिरिक्त ट्र्याकहरूको साथ, हालका महिनाहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
एप्पल संगीत कुनै पनि गीत सुन्न उपलब्ध अर्को स्ट्रिमिंग सेवा हो तपाईं कुनै पनि एन्ड्रोइड उपकरणमा खोज्दै हुनुहुन्छ। योसँग वाइफाइ वा G जी / G जी मार्फत कुनै पनि समयमा इन्टरनेट जडानको साथ सुन्नको लागि 60० लाख भन्दा बढी गीतहरू छन्।
हालै यो उत्तम प्लेटफर्म मध्ये एक हो कि त्यो गीत खोज्नको लागि जुन तपाईं यति धेरै खोज्दै हुनुहुन्छ, द्रुत खोजीमा, यसले संगीतको सूचि सिर्जना गर्नुपर्दछ, सबैभन्दा धेरै सुन्ने गीतहरू र अधिक। एप्पल संगीतले क्रस-प्लेटफर्मको बाहेक धेरै प्रकार्यहरू थप्दछ, या त एन्ड्रोइड मा, एक वेब सेवा छ र पक्कै पनि, iOS प्रणालीमा।
एप्पल संगीत सेवा लगभग months महिना निःशुल्क प्रदान गर्दछ यो परीक्षण गर्न, यस प्रकार सूचीको बारेमा थोरै सिक्न पर्याप्त समय भएको। एप्पल संगीत सदस्यता आधारभूत योजना को लागी 9,99 .4,99 e, यूरो को students.14,99। र युरो १6युरो छ यदि तपाई XNUMX जना सम्म परिवारको योजना प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
शार्क - संगीत
एकचोटि तपाईंले पहुँच गर्नुभयो भने, यसले संगीतको सामग्रीको पहुँचका साथ सरल इन्टरफेस देखाउँदछ, सबै पहिलेको दर्ता बिना नै, यद्यपि यो विज्ञापनबाट जोगिनका लागि दर्ता गर्नु उत्तम हो। एक पटक रेजिष्टर भएपछि तपाइँ गीत र गीत बिच विज्ञापन हटाउनुहुनेछ, त्यसैले यो यो अनुप्रयोगको एक शक्ति हो।
शार्क - संगीतले अन्ततः धेरै नयाँ गीतहरू थप्छयद्यपि यो अधिक थप गर्न आवश्यक छ यदि यसले अन्य ठूला सेवाहरूको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ भने। यो एक आदर्श विकल्प हो यदि तपाईं नि: शुल्क र मासिक वा वार्षिक भुक्तानी नगरी गीतहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने।
यो ईन्टरनेटमा सब भन्दा पुरानो संगीत सेवाहरू मध्ये एक हो, जुन समय बृद्धि भई हालको मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीहरूमा अनुकूलन गर्न र पुग्न प्रबन्ध गरेको छ। यो एक सांगीतिक सामाजिक नेटवर्क हो, जसमा तपाईले खोजिरहनु भएको गीत फेला पार्न सक्नुहुन्छ, किनकि यससँग एक शक्तिशाली खोज ईन्जिन छ र खोजलाई परिष्कृत गर्नका लागि फिल्टरहरू।
एकचोटि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएमा तपाईंसँग सिफारिस गरिएका गीतहरूको एक हिस्सा हुन्छ समुदाय द्वारा, आदर्श यदि तपाईं प्रख्यात गीतहरू वा नयाँ पुस्ता कलाकारहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने। त्यहाँ सबै प्रकारका शीर्षकहरू छन्, जो ती प्रसिद्धीमा लीप बनाउन चाहनेहरू र जसले लास्ट.एफएममा नि: शुल्क सामग्री अपलोड गर्न सक्दछन्।
विकासकर्ता: Last.fm लिमिटेड
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » शीर्ष १० विकल्पहरू एन्ड्रोइडमा स्पोटिफाई गर्न
एन्ड्रोइडका लागि best उत्तम पोखरी अनुप्रयोगहरू